Soomaaliya, 12 November 2019
Warbixinta guddiga ayaa sheegtay in hanaankii doorashada Koonfur Galbeed ay sidoo kale hareeyeen eedeymo ku saabsan laaluush, ayada oo xildhibaanada maamulka uu midkiiba helay lacag u dhaxeysa 20,000 ilaa 30,000 oo dollar, si ay u doortaan musharax la door-bidayey.
Lamaanihii dartood loo dilay Axmed Dowlo oo 'halis wajahaya'
Guddiga QM: Shabaab waxay hadda soo saaraan bambooyin
Bulshada Rayidka oo ka walaacsan xaaladda Soomaaliya
Xiisadda siyaasadeed ee xilligan u dhaxeeysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo axsaabta mucaaradka ayaa cirka isku shareertay.
Maxkamadda Sare ee Somalia oo dhageysaneysa dacwadda Himilo Qaran
Guddoomiyaja maxkamadda sare ee Soomaaliya Baashe Yuusuf ayaa VOA u sheegay in maalmaha soo socda ay billaabi doonaan dhageysiga dacwadda uu usoo gudbiyey xisbiga Himilo Qaran.
Taliyaha Asluubta oo sharxay hadal aad loogu cambaareeyey
Muqdisho: Kulan looga hadlay dib u dhiska garoonak Beledweyne
Kulan looga hadlayey sidii dib loogu dhisi lahaa garoonka diyaaradaha magaalada Beledweyne oo ay saameeyeen fatahaado ayaa maanta lagu qabtay Muqdisho.
Xiisad ka dhex oogantay madaxdii hore iyo xukuumadda Somalia
Madaxda xisbiyada mucaaradka Soomaaliya ayaa sheegay in shalay markii abaad is hortaag lagu sameeyey safar ay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya uga bixi lahaayeen Muqdisho.
Somaliland: 55% caruurta ma aadaan iskuullo
ILEYSKA VOA: Dhibaatada lagu qabo dulaaliinta caafimaadka (Q2)